Xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo aas qaran loo sameeyay. – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo aas qaran loo sameeyay.
Star FM December 31, 2018
Qaar ka mid ah Masuuliyiinta ugu saraysa dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa saakay ka qeyb galay Salaada Janaasada ee Marxuum Xildhibaan Axmed Mayoow Cabdulle oo loo yaqaanay (Korneel Ruush) kaasoo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Salaada Janaasada oo marxuumka lagula dukaday Masjidul Shuhadaa ee ku yaalla gudaha madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre,gudoomiyaha golaha shacbiga Maxamed Mursal Sh C/raxmaan, xildhibaanada labada golle ee Baarlamaanka, wasiiro, ehelka Marxuumka iyo masuuliyiin ka socday hay’addaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya.
Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal sh C/raxmaan ayaa sheegay in Marxuumka uu ahaa Shaqsi afgaaban oo mar walbo cibaadada Alle ku dadaala, naxariis badan dadkana caawiya, ku weyn tahay Soomaalinimada, jeclaa hormarinta dowladnimada, midnimada iyo dib u heshiisiinta umada Soomaaliyeed.
Alle ha u naxariistee Xildhibaan Korneel Ruush waxa uu ka mid ahaa baarlamaanka 10-aad ee hada shaqeeyo gaar ahaan golaha shacabka, waxaa laga soo doortay deegaanada maamulka koofur galbeed Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu xubin ka ahaa guddiga dastuurka ee labada golle ee Baarlamaanka wuxuuna qayb ka soo noqday baarlamaankii sagaalaad ee Soomaaliya.
Shalay galinkii danbe ayuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Erdogan ex Digfeer oo loola cararay kadib markii Sida la sheegay uu Xildhibaanka wadnaha istaagay.
Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Alle ha u naxariistee Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle (Col Ruush) iyo Xildhibaan Kheyre Maxamed Axmed oo ka tirsanaa Baarlamaanka Koonfur galbeed oo shalay ku geeriyooday Magaaladda Muqdisho.
Dhanka kale,Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa tacsi u diray Ehalada iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Alle ha u naxariistee Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle (Col Ruush),wuxuuna Alle uga baryay inuu janadiisa ka waraabiyo,ehaladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan Alle haka siiyo.
Ra’isulwasaare Xasan Cali Kheyre,ayaa ku tilmaamay inuu marxuum Axmed Mayow Abdulle uu ahaa Xildhibaan ka tirsan Golaha shacabka,islamarkaana shaqo badan u soo qabtay dalkiisa.
← In ka badan 60 qof oo ku dhimatay daadad saameeyay Filibiin
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ka baxay xisbi uu ka mid ahaa. →
Guddoomiyihii hore ee ismaamulka Kiambu oo digniin adag ka soo saaray musuqmaasuqa March 21, 2019
4 eedeysane oo lala xariiriyay lacago faalis ah oo maxkamadda la soo taagay March 21, 2019
Dubat Cali Cameey oo baaq ka soo saaray saameynta abaaraha March 21, 2019
Ciidanka dowlada iyo AL-shabaab oo ku dagaalamay gobolka shabeelada Hoose. March 21, 2019
Gudiga Joogtada ee Golaha shacabka Soomaaliya oo Maanta kulan yeelanaya. March 21, 2019
Maamulka Hirshabeelo oo sheegay inaysan khatar amni jirin kadib markii ay ciidamadu bananeeyeen deegaano dhowr ah. March 21, 2019
Wadanka New Zealand oo laga mamnuucay hubka fudud March 21, 2019
10 qof oo loo haystay dilal ka dhacay ismaamulka Vihiga oo la siidaayay March 21, 2019
In ka badan 200 oo dugsi oo aan weli lacago ka helin dowladda March 21, 2019
Guddoomiyihii hore ee ismaamulka Kiambu oo digniin adag ka soo saaray musuqmaasuqa
4 eedeysane oo lala xariiriyay lacago faalis ah oo maxkamadda la soo taagay
Dubat Cali Cameey oo baaq ka soo saaray saameynta abaaraha
Ciidanka dowlada iyo AL-shabaab oo ku dagaalamay gobolka shabeelada Hoose.
Gudiga Joogtada ee Golaha shacabka Soomaaliya oo Maanta kulan yeelanaya.
Wadanka New Zealand oo laga mamnuucay hubka fudud
10 qof oo loo haystay dilal ka dhacay ismaamulka Vihiga oo la siidaayay
In ka badan 200 oo dugsi oo aan weli lacago ka helin dowladda